Kooxaha Southampton iyo Aston Villa oo Guulo Gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Southampton ayaa garoonkeeda St. Mary’s Stadium 1-0 uga badisay kooxda Crystal Palace.
Kooxda Southampton oo tartan ugu jirto kamid noqoshada afarta kooxood ee ugu sareeya horyaalka ingiriiska ayaana badin shantii kulan ee ugu dambeysay horyaalka ingiriiska.
Ciyaaryahan Sadio Mane ayaa daqiiqadii 83-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Southampton.
Kooxda Southampton ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay kaalinta shanaad,waxana ay leedahay 49-dhibcood,halka kooxda Crystal Palace ay horyaalka uga jirto kaalinta 12-aad,iyadoo leh 30-dhibcood.
Kooxda Aston Villa ayaa garoonkeeda Villa Park 2-1 uga badisay kooxda West Bromwich Albion.
Kooxda Aston Villa ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 23-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Gabriel Agbonlahor,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Saido Berahino ayaa daqiiqadii 67-aad ee ciyaarta goolka bareejada u dhaliyay kooxda West Bromwich Albion.
Ciyaaryahan Christian Benteke ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka guusha oo rigoore ahaa u dhaliyay kooxda Aston Villa.
Tababaraha cusub ee koxda Aston Villa Tim Sherwood ayaa aad ugu farxay guushiisii u horeysay ee uu la gaaro kooxda.
Kooxda Aston Villa ayaa heshay guusheedii ugu horeysay ee horyaalka ingiriiska oo ay gaarto ilaa bishii 7-dii bishii December ee sanadkii dhamaaday ee 2014.
Kooxda Aston Villa ayaa ka soo baxday kaalimaha ugu hooseeya ee horyaalka ingiriiska,waxana ay soo gashay kaalinta 17-aad,iyadoo leh 25-dhibcood,halka kooxda West Brom ay horyaalka uga jirto kaalinta 13-aad,iyadoo leh 30-dhibcood.
Kooxda Hull City ayaa garoonkeeda KC Stadium barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Sunderland.
Kooxda Hull City ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 15-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Dame N’Doye.
Garsoorihii ciyaarta Mike Dean ayaa kaarka casaanka ah u taagay oo tarabuunka saaray tababaraha kooxda Sunderland,ka dib markii uu u fakaday tababaraha kooxda Hull City Steve Bruce dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Jack Rodwell ayaa daqiiqadii 77-aad ee ciyaarta goolka bareejada u dhaliyay kooxda Sunderland.
Kooxda Hull City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 15-aad,waxana ay leedahay 27-dhibcood,halka kooxda Sunderland ay horyaalka uga jirto kaalinta 16-aad,iyadoo leh 26-dhibcood.